Dad isku qoys ahaa oo ku dhintey Qaraxii Maanta – Radio Baidoa
Afhayeenka Maamulka Gobolka Banaadir Saalah Caumar Xasan ayaa sheegay in Ruux isku soo xirey waxyaabaha qarxa uu isku qarxiyey Maqaayad ku taalla Suuqayaraha u dhow Isgoyska sayidka,isla markaana ay ku geeriyoodeen Saddex Ruux.
Afhayeenka ayaa waxaa hadalkiisa uu intaasi ku darey in qarax ay ku dhaawacmeen Lix Ruux,hayeeshee Saddex kamid ah oo isku qoys ahaa ay u geeriyoodeen dhaawac kasoo gaarey qaraxa.
“Ruux naftii halige ah ayaa isku qarxiyay agagaarka Baar-Bulsho ee Degmada Howlwadaag. gaar ahaan suuq yaraha Sayidka. Waxaa ku dhaawacmay 6 ruux oo 4 ka mid ah ay yihiin 1 Qoys, Inkastoo markii danbe ay Isbitaalka ku geeriyoodeen 3 ka mid ah qoyska ayuu yiri”Saalax Dheere.
Marka laga soo tagao warkaan kasoo baxey Afhayeenka Maamulka Gobolka Banaadir Saalax Dheere laamaha Amniga Soomaaliya weli wax faah faahin ah kama bixin qaraxa ismiidaaminta ahaa.